Inona no atao hoe Feliway ary ampiasaina amin'ny inona izy io? | Noti saka
Fa inona ny Feliway ary ampiasaina amin'ny inona izy io?
Miady saina ve ny sakao? Tena tsy mahazo aina ve ianao rehefa ao anaty mpitatitra? Raha izany dia misy vokatra izay hanampy anao hahatsapa ho tony: ny Feliway, amidy amin'ny fanaparitahana na toy ny famafazana. Miankina amin'izay novidinao, ny marina dia ho soso-kevitra bebe kokoa amin'ny toe-javatra manokana izy io, na dia mitovy aza ny vokatra.
Fa inona marina ilay Feliway? Inona no anaovana azy? Ary ny tena zava-dehibe, Inona no ampiasaina azy io?
1 Inona ilay Feliway?
2 Fa inona izany?
Inona ilay Feliway?
Ity dia vokatra iray izay dia dika mitovy amin'ny pheromones amin'ny saka saka. Raha mijery akaiky ianao dia matetika ny namantsika no manatona anay, ary miborosy anay amin'ny tarehiny, ka mamela anay ny pheromones anay. Ity dia fomba fampahafantarana antsika voalohany fa anisan'ny fianakaviany isika, ary koa mba hahafahantsika, amin'ny fomba sasany, hampahafantatra azy fa afaka mahatsapa voaro sy voaro miaraka amintsika izy.
Noho ireo antony ireo dia ampirisihina mafy amin'ny toe-javatra mampihetsi-po ny fampiasana an'io vokatra io, toy ny manampy anao hiala sasatra be dia be.
Fa inona izany?
Ho fanampin'ny toe-javatra mampiady saina, ny marina dia soso-kevitra ihany koa amin'ny tranga maro hafa. Saingy araka ny efa nolazainay teo aloha, ny diffuser sy ny spray dia tsy ampiasaina amin'ny toe-javatra mitovy foana:
FELIWAY Optimum - Vaovao ...
Ho an'ireo tranga izay misy fiovana ao an-trano, na fanovana ao an-trano (fahatongavan'ny mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana, ohatra, na olona na biby), rehefa misy mpitsidika, na raha mahatsapa tena tsy mahazo aina ianao mandrapahatongan'ny fotoana ny fikolokoloana be loatra.
Ity vokatra ity dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny dia, handeha any amin'ny mpitsabo biby, mba ho tony ao amin'ny fonenan'ny lavalava raha mbola tsy eo izahay, hijanona tsy hanisy marika amin'ny urine na hikorontana ny fanaka.
Amin'ity vokatra ity ny vintana mety hahatsapan'ny namanao fahasambarana toy ilay ao amin'ny sary dia avo dia avo 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Cheats » Fa inona ny Feliway ary ampiasaina amin'ny inona izy io?
Magnolia dia hoy izy:
Salama, manana saka mainty tsara tarehy izay nomenay firaiketam-po maro hatramin'ny nahatongavany tany an-trano, tamin'ny naha zaza azy dia tia nilalao fitiavana izy, manana alika kely roa aho ary tsara miaraka amin'izy ireo, indrindra amin'ny lahy, ny tena izy dia efa manana herintaona izy izao, ary 6 volana eo ho eo dia nanomboka niova ho mahery setra ny toetrany rehefa tiany sy tena mahaleo tena izy, tsy mitrongy intsony toy ny taloha ary nokapohiny ny alika tsy te hilalao intsony, ary koa raha Tonga any an-trano ny olona fa tsy tian'izy ireo aza, na dia tiany aza izy, tsy azoko hoe maninona no toy izany ary ankehitriny satria manana patio aho ary fahavaratra dia manokatra varavarana aho ary mivoaka amin'ny alina amin'ny tafontrano izy rehefa alina nefa tsy mitandrina, intelo tsy maintsy navoakanay avy teo amin'ny tokotanin'ilay mpifanila trano izy satria tsy hainy ny mivoaka indray mandeha ao anatiny, mahalana vao tsy haiko, ianao no mikarakara azy ary mamela anao indray mandeha monja amin'ny fotoana mahasosotra anao, Te-hahalala izay azoko atao aho ary maninona no toy izany izao rehefa nanangana azy tamim-pitiavana isika.
Mamaly an'i magnolia
Raha sanatria, ny zavatra voalohany hatoroiko dia ny fitondrana azy any amin'ny mpitsabo biby amin'ny fanadinana feno. Mety ho hafahafa izany, saingy indraindray ny fiovana tampoka eo amin'ny fitondran-tena dia noho ny fanaintainan'ny biby na karazana tsy mahazo aina.
Raha milamina ny zava-drehetra dia zava-dehibe ny hahafantarana raha nisy zava-dratsy niainan'ny saka tao an-trano, toy ny alika na olona natahotra na nanelingelina azy tato ho ato. Raha izany no izy, ny saka dia tokony hampifandraisina amin'ny alika na amin'ilay olona, ​​hiezahana hahazoana antoka fa samy manana fotoana mahafinaritra izy ireo eo am-panajana ny toerana misy azy avy (ny olona dia tokony hanome ny saka ny fitsaboana mba hatokisany azy; Etsy ankilany, raha iray amin'ireo alika izay tsy tiany dia tokony homenao azy ireo ny loka roa isaky ny miaraka izy ireo).
Mety ho toy izany koa ny fitondrantenany raha mahatsiaro ho voan'ny adin-tsaina na trotraka izy. Amin'ireto tranga ireto, ny vokatra mampitony toa an'i Feliway dia mety hanampy anao, na Bach Flowers (manokana, Rescue Remedy: maka 4 nilatsaka amin'ny sakafo lena).
Raha tsy misy na inona na inona miasa an'io dia tokony hiantsoana mpahay fizika.
Mirta dia hoy izy:
Novakiako ny torolàlana momba ny fampiasana an'i Feliway izay manondro ny fametrahana ny diffuser "ao amin'ny efitranon'ny trano tian'ilay saka." Ny tiana hambara dia ny efitrano malalako saka ahy dia ny efitrako ihany. Manontany aho, tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona ve ireo hormonina ireo? tsy misy olana amiko?
Manazava aho fa te-hametraka diffuser satria miloko be loatra ny saka nefa tsy misy olana ara-pahasalamana hita maso. Nahatonga teboka sola tsy dia lehibe loatra amin'ny kibo ary tsy tiako hambinina izany.
Saka saro-kenatra izy, tsy mifikitra loatra fa milamina sy milalao ihany, ary nidina moramora matetika koa izy. Ny tiana holazaina dia hoe roa taona lasa izay dia naka saka (navotana tamin'ny fanararaotana, tantara lava be) isika ary lasa tsy mora tohina, lavitra, tsy mihinana firy, milelaka ny vatany iray manontolo, im-betsaka isan'andro ary mandany tontolo andro matory eo am-pandriako. Tsy mifanaraka amin'ny saka izy, te hilalao izy ary manafika azy. Raha fintinina dia mandinika an'i Feliway aho.
Mamaly an'i Mirta
Tsia, tsy misy vokany ratsy eo amin'ny olombelona izany. Aza manahy.
salama aho manana saka manototra ny fanaka vaovaoko, tsy manongilan-tsofina ilay mpanao hosoka ... inona no tokony homeko ilay feliway amin'ilay scratcher ka mila fitiavana na fanaka aho mba tsy hanakaiky azy ireo?
Mba hianarako mampiasa ny scraper dia mamporisika anao aho hamaky Ity lahatsoratra ity.
Mikasika ny feliway, amin'ny tranga manokana dia tokony apetrakao amin'ny fanaka izany.
Ahoana no hampifaliana ny saka anao
Maninona ny saka no matory eo ambonin'ny tompony